I-verb yesiFrentshi "iCesser" (ukuyeka) iConfuted?
Indlela yokudibanisa "iCesser" (ukuyeka, ukuyeka) ngesiFrentshi
Musa "Yeka" Ngalesi siNgisi sesiFrentshi esilula
NgesiFrentshi, isenzi isenzo sithetha "ukuyeka" okanye "ukuyeka." Oku kulula ukukhumbula ngenxa yokuba kuzwakala ngathi isiNgesi "sishiya" nangona ukupela isipeliso kancinci. Abafundi beFrentshi baya kufumana le nto ibe isifundo esilula kwisenzo .
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi seCesser
Isitshixo sokuphela komsebenzi siphelile kwaye sisigxina -Izenzi . Oku kuthetha ukuba kufuneka udibanise iziphelo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ezininzi izenzi ukuluxuba xa ufuna ukuthetha "ukumisa" okanye "ukuyeka."
Isilathiso sesenzi sidibanisa ukuphela okungapheliyo ukuze sichaze ngoku, ikusasa okanye ixesha elidlulileyo. Oku kufana nokongeza i-ored okanye-in ngesiNgesi. Kuyinkimbinkimbi ngakumbi kwisiFrentshi, nangona kunjalo, kuba sitshintsha iziphelo ukufanisa isihloko kunye nexesha.
Ishati iya kukunceda uhambe ngeendlela ezahlukeneyo zokuphela. Mane ufanane nesigama sesigxina ngexesha elifanelekileyo: " Ndiyeke " " ndiyayeka " kwaye "siya kumisa" ngu " sisi cesserons ."
ukuyeka cesserai ukuyeka
iphelile cesseras ukuyeka
ukuyeka umqolo ukuyeka
ukuyeka iimvumba ukuhanjiswa
lasez cima cessiez
iphela cesseront ayeke
Ukuthatha inxaxheba kwiCesser
Ukusebenzisa isitshixo sokuyeka , ukongeza kwaye unako ukuthatha inxaxheba . Kule fomu, ukuyeka usebenze njengesigqibo, i-gerund, okanye isibizo kunye nesenzi.
I-Passé Composé kunye neNxaxheba yangaphambili
I- passé compé yindlela eqhelekileyo yokubonisa ixesha elidlulileyo kwisiFrentshi.
Ukuze uyisebenzise, ​​qalisa ngokudibanisa isenzi esixhasayo ngokubhekiselele kwisifundo. Emva kwalokho , yongeza nje i- participant cessé .
Ngokomzekelo, "ndayeka" "ndiyekile " kwaye "siphelile" " siyekile ." Phawula indlela i- ai kunye ne-conjugates ye- poss kunye ne-participate eyadlulileyo isetyenziswe kwizifundo zombini.
Ukulula ukuCamer Conjugations to Know
Kukho ezinye iimbambano zokuqhawulwa kweminye ukuze usebenzise ngamanye amaxesha. Ukuzithoba kunye neemeko zentsingiselo zentsenzi, zithetha iqondo lokungaqiniseki, kwaye zisetyenziswa rhoqo. Ngokwahlukileyo, i- passé compé kunye nokuthobela ukungafezeki kubaluleke kakhulu ukugcinwa kokubhala ngokusemthethweni, ngoko banokuthi banqabile.
ukuyeka cesserais cessai cessasse
iphelile cesserais cessas ikhefu
ukuyeka ukuyeka ukuyeka ikhefu
ukuhanjiswa ikhefu cessâmes ukuyeka
cessiez cesseriez cessâtes cessassiez
iphela ukuyeka phelile ukuyeka
Ukubonakalisa ukuyeka ekumemeni , sebenzisa ifom yesimo esicwangcisiweyo . Xa wenza njalo, unokweqa isichazi sesifundo uze usetyenzise isenzi ngokwakho: " cima " kunokuba " uyeke ."
IsiNgqungquthela okanye IsiLwimi esiNinzi?
Iziganeko ezingabonakaliyo zesiFrentshi ii-Adjectifs invariables
IiVebhu ezitshintshileyo nezingenakucatshulwa ngesiJamani
Iimpawu ezibalayo nezingenakubalwa
Indlela yokuvakalisa izibongozo ngesiFrentshi
NgesiFrentshi, Ukuba Uthotywe, Usebenzisa isenzi sesiNgesi
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iCadere
Indlela yokusebenzisa Isiqendu esichaphazelekayo
Ukuguqulelwa kwezivakalisi Ukuzivocavoca kwabafundi be-ESL
Iimodyuli zeValics Quiz
Ubume bemiSebenzi yeSpanish
I-Blue Blue Color Change Demo
U-Edwin Hubble: I-Astronomer Who Found the Universe
Konke malunga neShumi
Iphrofayili ye-NASA Inventor uRobert G Bryant
Funda ukuguqula iiFom kwiiNgxelo kwi-Microsoft Access 2013
I-Tai Hsi - iTaoist Embryonic Breathing
Ukubala indawo kunye ne-PHP
Iingxaki eziphezulu zeMpilo zeNtombi ze-Awesifazane-Izizathu ezibangela ukufa phakathi kwabesifazane
I-Emigración ichaza i-Canadá ibe ngama-347 ubugcisa bobugcisa
Mayelana neSebe lezoBulungisa base-United States (DOJ)
I-MAP vs. MSRP Intengo: Oko Kuthethayo, Indlela Abalinganisa ngayo
Iingxoxo eziphambili ezivela kwiindlela zombini zokukhupha isisu
'Abahlali beNdlu zeNdlu' Iinkcukacha
I-Opposition Official yaseCanada iCorporate Majority Power and Control
Abaculi belizwe labaseCanada elibalulekileyo
Isikhokelo sembali kunye nesimo seKenpo Karate
Ukuhlaziywa: I-Firestone Firehawk Wide Oval AS
Uluhlu lweeKumkani zaseSpartan
IiKholeji eziphezulu zeNtshona Coast neeYunivesithi
Indlela yokufunda iMigqaliselo yeMbali
Indlela yokufaka iPompile yakho ye-Fuel: DIY
Isingeniso esifutshane kuzo zonke iintlobo zezilwanyana
Yintoni Ukukhanya Okumnyama?
Indlela yokwenza izibongozo zikaRhulumente ngaphantsi kwemizuzu engama-5
I-Bryan College of Health Sciences Admissions
I-New England Colonial Architecture - Izindlu Zasekudala Kwizindlu Ezitsha